उपत्यकामा कस्ता व्यक्तिलाई देखिएकाे छ... :: विवेक राई :: Setopati
उपत्यकामा कस्ता व्यक्तिलाई देखिएकाे छ कोरोना? (भिडिओ) 'एकदिन संक्रमण समुदायमा जान्छ'
विवेक राई काठमाडाैं, असार
कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको समेत नेतृव्त सम्हालेका पाण्डे भन्छन्, 'कतै बाहिर नगएको व्यक्तिमा पनि संक्रमण देखिएको छ। त्यसैले साँच्चिकै यी व्यक्तिहरूलाई मात्र संक्रमण भएको हो कि बाहिर पनि संक्रमण फैलिएको छ भनेर हामीले त्यस्ता ठाउँ वरिपरिको प्रतिनिधिमुलक नमूना लिएर परीक्षण गर्ने तयारी गरेका छौं।'
केही संक्रमितहरू स्वास्थ्यकर्मी समेत रहेको पाण्डेले जानकारी दिए। यसरी उपत्यकामा कतै नगएको व्यक्तिमा पनि संक्रमण देखिन थालेपछि 'लोकल ट्रान्समिसन' थप फैलिने जोखिम बढेको छ।
निर्देशक पाण्डे भन्छन्, 'अब चिन्ता के छ भने यो छिटपुट रुपमा लोकल ट्रान्समिसन त देखियो तर यो कुन तहको हो भन्नलाई चिन्ताको विषय बनेको छ।' उपत्यकामा ठूलो जनघनत्व भएकाले पनि विशेष ध्यान दिइएको उनको भनाइ छ।
'काठमाडौं र देशभरको स्थिति हेर्दा कुनै बेला यो रोग समुदायमा जान्छ र जानैपर्छ' उनले भने, 'यसको कुनै खोप वा औषधि छैन। त्यो हिसाबले यो रोग एकदिन समुदायमा जान्छ नै।'
त्यसैले काठमाडौंको लागि विशेष रणनीति अपनाउने तयारी रहेको उनले बताए। 'काठमाडौंमा पनि सुकुमवासी टोलमा एकजना संक्रमित भेटिनुभयो। त्यहाँ मानिसको बाक्लो वस्ती छ। त्यसैले त्यस्ता ठाउँहरूलाई बढी केन्द्रित गर्ने सोचेका छौं,' निर्देशक पाण्डेले भने।
अब संक्रमण रोक्न कन्ट्याक्ट ट्रेसिङभन्दा पनि सर्वसाधारण आफैं सचेत हुनुपर्ने उनी बताउँछन्। उपत्यकामा समेत शतप्रतिशत कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ प्रभावकारी बनाउन नसकिएको स्वीकार गर्दै पाण्डेले भने, 'टेकु अस्पतालमा परीक्षण गर्न आउनुहुन्छ तर उहाँहरू त्यहाँ आउँदा केमा आउनुभयो, बाटोमा को-को सँग भेट्नुभयो? ती व्यक्तिहरू ट्रेसिङ गर्न छुटेका छन्।'
'हामीले के बिर्सिनुहुँदैन भने हामी भारतसँग जोडिएका छौं। त्यसैले जहिलेसम्म भारतमा यो रोगको नियन्त्रण हुँदैन नेपालमा नियन्त्रण गर्न गाह्रो छ,' उनले भने।
निर्देशक पाण्डेले उपत्यकामा संक्रमण थप बढ्नसक्ने भन्दै अस्पतालहरूलाई तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने बताउँछन्। उपत्यकामा संक्रमण कहाँ-कहाँ पुगेको छ भनेर पत्ता लगाउन महाशाखाले 'कन्ट्याक्ट इन्भेस्टिगेसन र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ' नामको 'डेडिकेटेड टिम' बनाएर काम अघि बढाउने तयारी गरेको छ।
'मन्त्रीले पनि हामीले भनेकै सूचानाका आधारमा भन्ने हो' उनले भने, 'समुदायमा भन्नलाई ठूलो संख्यामा संक्रमित हुनुपर्छ जसको कुनै पनि ट्राभल हिस्ट्री हुनुहुन्न। त्यसैले केही ठाउँमा धेरै व्यक्तिमा देखिएको 'क्लस्टर केस' हो तर समुदायमा गएको छैन।'
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार १९, २०७७, १५:३०:००